चितवन २ (ख) प्रदेश उम्मेदवार प्रकाश भन्छन् : औद्योगिक क्षेत्र बनाउने संकल्प छ, पढौँ पुरा जिवनी – Saurahaonline.com
चितवन २ (ख) प्रदेश उम्मेदवार प्रकाश भन्छन् : औद्योगिक क्षेत्र बनाउने संकल्प छ, पढौँ पुरा जिवनी
चितवन, २३ कार्तिक । मंसीर २१ गते हुन लागेको दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जनमत बटुल्न उम्मेदवारहरु घरदैलो अभियानमा सक्रिय बनेका छन् । चितवन २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका नेता प्रकाश अधिकारी पनि चुनावी अभियानमा लागिपरेका छन् । उनी चुनावी सभा भन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै आफ्नो उम्मेदवारीबारे जानकारी गराउँदै आइरहेका छन् । चितवन २(ख) मा ५५ हजार ९ सय १७ जना मतदाता छन् । यो क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाका ७ वटा वडा पर्दछन् ।
औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछुः अधिकारी
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका चितवन २(ख) बाट उम्मेदवारी दिएका प्रकाश अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र कायम गरेर उद्योग विस्तार गर्ने योजना ल्याउने बताएका छन् । उनले उद्योग स्थापनाका लागि क्षेत्र कायम गरेर योजना कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । “रोजगारी नपाएर खाडी मुलुकमा २०–३० हजार रुपैयाँका लागि बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “यहि रोजगारीका सृजना गर्नेछौँ, उद्योग विस्तार गर्ने नीति उच्च प्राथमिकतामा पार्नेछु ।” उनले औद्योगिक प्रदुषण कम गर्न सुरुदेखिनै विशेष योजना तयार गरिने बताए । उनले सुकुम्बासी समस्या र वन्यजन्तु मानववस्ती प्रवेश गर्ने समस्या समाधान गर्नु आफ्नो दोस्रो मुख्य काम हुने बताए । “यो नारायणी किनारमा सुकुम्बासी समस्या छ, जंगल आसपासका वस्तीमा वन्यजन्तुको त्रास छ”, उनले भने, “व्यवस्थित वस्ती विकास योजना र आयआर्जनमूलक कार्यका विशेष योजना कार्यान्वयन गर्नेछु ।”
उनले पिछडीएका वस्ती समुदायको विकास गर्न विशेष ध्यान दिएरै विकासका योजना तयार गरिने बताए । “अवसरका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको होइन”, उनले भने, “राजनीतिलाई सेवा र समाज विकास गर्ने माध्यम बनाउने सन्देश छर्न जनमत खोज्दै आएको हुँ ।” उनले जनताले विगत आँफुले गरेका नेतृत्वदायी भूमिका, सामाजिक अभियानकै कारण चुनाव जित्ने बताए । “विपक्षी गठबन्धनको मलाई कुनै चिन्ता छैन”, उनले भने, “कार्यकर्ताको भोटले मात्रै संसारमा कसैले पनि चुनाव जितेको छैन, चुनाव जित्न जनताको भोट चाहिन्छ, म ढुक्क छु ।” उनले वामगठबन्धन गरेर कार्यकर्ताबीच एकताको प्रयास गरेपनि जनताबीच एकता हुन नसकेको बताए ।
प्रकाश अधिकारी को हुन् ?
प्रकाश अधिकारी १७ वर्ष शिक्षण पेशमा आवद्ध व्यक्ति हुन् । उनले अंग्रेजीमा एम.ए. गरेका छन् । मिठो बोल्ने शैलीका धनि अधिकारीको निष्ठाको राजनीति गर्न रुचाउँछन् । उनका दाजु यज्ञप्रसाद अधिकारी २०३३ सालमा वीपिको राष्ट्रिय नीति लिएर अघि बढ्दा जेल परेका थिए । दाजु जेलमा परेपछि उनमा समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिप्रति लाग्ने प्रेरणा मिल्यो । उनी त्यो बेला १३ वर्षका थिए । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा उनले स्कुलतहबाटै नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । उनी २०४७ सालमा नेविसंघ चितवनको सभापति, ०४८ मा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । ०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा भरतपुर–१० बाट उनी वडाध्यक्षका उम्मेदवार समेत थिए । झण्डै १७ वर्ष प्रध्यापन पेशमा संलग्न अधिकारी विद्यार्थीबीच निकै रुचाइएका प्राध्यापकका रुपमा चिनिन्थिे । ९ वटा विश्वविद्यालयलाई समेटेर बनेको नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महासचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
१३ औं महाधिवेसनबाट उनी कांग्रेसको महाधिवेसन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य समेत बनिसकेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेस चितवनको जिल्ला कार्यसमितिमा पटक पटक सदस्यका रुपमा रहेर पार्टी सुदृढिकरण अभियानमा सक्रिय बनेका व्यक्ति हुन् । उनी पछिल्लो समय जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवार समेत थिए । पर्वत जन्मेका अधिकारी २०३० सालमा चितवन बसाईसरि आएका थिए ।